Apedza ndakazwa ndoshevedzwa hanzi, “please come and give me a hand,” ini ndakaenda ndichingoti hameno something very simple. Ndasvika mubedroom rake ndikaona mwana akangomonera towel chete, zvikanzi, “please massage me,” akadaro achinditambidza chibhotoro chemafuta ainhuwirira zvaidakadza. Kungodaro akabva arara pamubhedha nedumbu apa abvisa towel rave kumagaro uku, ndakaona ganda rakatsetseka, apa ndakanga ndisati ndamboona murungu mudiki asina kupfeka, zvino kapfungwa kakabva kauya kekuda kukwira mboro ichibva yasimuka mubhurugwa. Ndakaisa mafuta mumaoko ndokuakwizanisa, pangakangobata musanaso heyi mboro yakabva yavhunduka so, Ndakamboshinga asi zvakaramba, ndobva ndamuti, “can I use your bathroom please,?” akapindura zviri pasi pasi achiti ndiende zvangu, ndaamo ndakamira kuti mboro imbodzika ndikanzwa door rovhurwa, zvikanzi, “sorry I forgot to give you a towel,” akadaro achinditambidza towel asi asina hake kupfeka.
Ndatambira towel ndakaramba ndakamira, iye ndobva abuda, achingobuda ndakavura shower ndokupindamo. Pasina nguva akadzoka ndokupindawo mushower, akabva atanga kundikisser ini ndikati dzawira mutswanda, takatsvodana shower ichitirova zvedu, akabata mudhara ndiakuona wokura, iye ndokutanga kuubonyora zvake zvinyoro nyoro. Akavhara mvura kwakudhidhonzera kubedroom kwake, akandisairira pamubhedha pasina chinguva ndikanzwa yave mukanwa, apa ndarakidza kushamisika nekuvhunduka, nekuti izvi handaizvizivawo. Iwe akazviona ndobva angoti, “you not comfortable, maybe next time,”
Ndakabva ndatanga kumubata mazamu aiva makuru iyayo apa akamira kwe kuti twii but apamira zvawo. Ndakaita zvandajaira zvekuayamwa ndikanzwa kamhere nekakushinyira, chigunwe chakananga kunyini, ndikanzwa kwatotota kare. Ndakabata kusvika angorembera, ndamurarisa pamubhedha, ndovhura makumbo, mboro pambutu, kuti ndipinze yakaramba, aiva nekapeche kadiki, ndofunga Aiwa aimboisa nekadiki diki or haadhonza zvinoita vekumusha, I don’t know. After the third time ichiramba akazoti, ” your thing is too big for me, I haven’t had a child yet so beche is still tiny and tight,” Apa ndakaona kuti ndikaita zvekutamba ndaitoita mufara ndega, saka ndakamuti ngaauye pamusoro, akabvuma nokuti ndakamuti unocontroller how deep I go, akabvuma.
Zvino akauya pamusoro ndokuigarira, apa musoro chete ndiwo wakapinda, ndikanzwa mwana oshunyira, akati koi koi koi, ikawedzera kupinda, ndokumbomira, akapamha zve ikawedzera, akamirazve. Ndakaona obata padumbu apa onyanyisa kuchemerera, akatanga kukoira yangopinda just a third, ini ndichinzwa mboro yakanyatsoti mba-mba-mba ne beche, kutarisa kudai kuona hapana kana pekufema napo.
Ndakasuduruka kumashure ndobva yati pindei futi iye kwakujamba kuibudisa. Akabata beche rake akarikwisa, ndobva aisa mate pamboro, akadzokazve ndokuigarirazve, Akadzokorodza zvaive amboita kusvika mboro yapinda half way, akaramba akadaro achingotambirira, ndobva atanga kugwinha gwinha ndikanzwa diti rangu rotsunyiwa, akakoira ndobva atunda, apo ndakaona kuti akutunda ndakubata magaro ndokumudhonzera pasi apa mboro ichibva yanyura yese ndikanzwa mwana achitsemukira. Akabva aridza mhere ini ndokumupidigura oenda pasi, ndakatanga kupomba akazhamba zvekuzhamba zviya izvi, apa ndakakanga ndonzwa havi yakaoma zvekuti zvake zvekuchema handina kana kumbozviisa munzeve,
Payakapinda yose ndaona murungu otsvuka kumeso nekuvhura maziso apa muromo washama. Akada kumbondipusha asi zvakatowedzera simba rangu, ndikabva ndawedzera kunyudza, ndakapomba ndikanzwa ogwinha gwinha futi achibva atunda, ndasimudzira tumagaro ichibva yanyatsoti nyu, apa ndakanakirwa nekuti hamheno chandakagumha mubeche, iye ndokuridzazve imwe mhere, Akabva andisunga musana nemakumbo ake ini kwakumutsvoda nekuisa rurimi panzeve, ndakabva ndonzwa hwouya huronyo, ndobva ndawedzera kupomba iye akatanga kuzuzuma ndokubva tatundirana.
Ndatunda takamboramba takadaro irimo, tichizororora, ndakanzwa yotanga zve kumuka irimo, iye ndobva aizvomhora kwakuvhara makumbo. Takabva tamborara, pasina nguva yakatanga kumira futi, ndikatanga kupuruzira musikana, akatanga kutsvodana, bvaatanga kucompaliner hanzi, ” I am sore pabeche rangu,” ndakabva ndangoziva kuti musi uyu hakuchina chinhu.
PREVIOUS POST Previous post: Kukwesha ka Babie kepaFacebook on Valentines day
NEXT POST Next post: Confessions of a Married woman: Kuzvamburwa neMboro nemuchinda wepaChigayo